MW kuxigeenka Oo Kulan Layeeshay Wasiirka Waxbarashada JDFI - Cakaara News
MW kuxigeenka Oo Kulan Layeeshay Wasiirka Waxbarashada JDFI
Addisababa(CN) Jamce, 29ka January 2016, madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane Mowliid Haayir Xasan ayaa maanta kulan layeeshay wasiirka waxbarashada JDFI mudane Shefaraw Shugudhe iyo sidoo kale wasiir kuxigeenka wasaarada waxbarashada JDFI ee dhinaca jaamacadaha iyo tacliinta sare mudane Dr. Samuel.
Madaxwayne kuxigeenka ayay kawada hadleen wasiirka iyo kuxigeenkiisa sidii bishan inagu soo aadan ee 6, aad-Yekatit 2008 TI loo bilaabi lahaa dhismaha jaamacada qabridahar iyadoo hirgalinta iyo fulinta qorshahan la isla qaatay.
Dhanka kale, waxaa xusid mudan in xiligii ay jaamacadan dhagax-dhigeen madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo raisal wasaare kuxigeenka dalka mudane Dhamaqe Mokennin laga joogo oo kali ah mudo kayar 5 bilood. Tanina waxay kutusinaysaa taageerada dawlada federaalka ahi ay had iyo jeer lagarab taagan tahay fulinta qorshayaasha horumarineed ee sida laxaadka leh uga socda dalka gabi ahaan.
Hadaba mashruucan dhismaha jaamacada oo ah mashruuc aad u balaadhan ayaa ah mid ay bulshada deegaanku aad ugu baahnayd oo horumar dhinaca waxbarashada sare ah u soo hoyin doona bulshada dalka guud ahaan, khaasatan shacabwaynaha kudhaqan deegaanka.
Sidoo kale, mashruucan ayaa noqon doona mid kumanaan qof oo deegaanka ah shaqo abuur u samayn doona kasokow kor uqaadida heerka waxbarashada dalka iyo deegaankaba.